ခြစ်ရာမှအဖြူကိတ်မုန့် (ပျော့ပျောင်းသော) - ကိတ်မုန့်
ဒီအဖြူကိတ်မုန့်စာရွက်သည်ပြီးပြည့်စုံသောဂန္ထဝင်ဖြူသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ အလင်းနှင့် fluffy, စိုထိုင်းသောနှင့်အရသာပြည့်ဝ၏။ ကိတ်မုန့်ကမ်ဘာပျေါတွင်အဖြူသည်အရသာတစ်ခုမဟုတ်ကွောင်း၎င်းမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သည် vanilla ကိတ်မုန့် ။ ဒါပေမယ့်အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်ကအဖြူရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံး, အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်စာရွက်ကိုဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
White ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများမူလကမင်္ဂလာဆောင်များအတွက်ဖန်တီးရှိရာ။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများသာဖြူသောဂျုံမှုန့်နှင့်သကြားကိုတတ်နိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်သည်သင်၏စည်းစိမ်၏သင်္ကေတဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်စိုထိုင်းသောအစအနရှိသည့်အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်သည်အဖြစ်အပျက်အားလုံးအတွက်ဖုတ်ထားသောအသုံးအများဆုံးအရသာကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ချင်တော့, ငါ (Portland, Oregon) မှငါဘယ်မှာအော်ဂဲနစ်များများနှင့်ပိုမိုသန့်စင်သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြ၏, သူတို့ကပိုစျေးကြီးသည်။ အရာရာအပြည့်အဝစက်ဝိုင်းသွားလေ့ဘယ်လောက်ရယ်စရာ။
လူအတော်များများကအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းတွေနဲ့ရောထွေးနေတယ် အဝါရောင်ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်ပင် vanilla ကိတ်မုန့် ။ အလားတူဖြစ်သော်လည်းဤအမှန်တကယ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကိတ်မုန့်အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်ကြက်ဥထည့်သွင်းဘယ်လိုအတူလုပ်ဖို့။ အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်စာရွက်သည်ကြက်ဥ၏အဖြူရောင်ကိုသာအသုံးပြုသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထောပတ်နှင့်သကြားအရောအနှောများထဲသို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုက်နှက်ပြီးနောက်ဘက်ထရီထဲသို့ခေါက်သည်။ ဗန်နီယယ်ကိတ်မုန့်သည်ကြက်ဥအဖြူနှင့်ကြက်ဥအနှစ်များ (များသောအားဖြင့်) နှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ အဖြူရောင်နည်းသောကိတ်မုန့်ကိုဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အရသာအများဆုံးရှိသည်။ အဝါရောင်ကိတ်မုန့်ကိုကြက်ဥအနှစ်နှင့်သာပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Battery သည်အရသာများစွာရှိသည့်ရွှေရောင်အရောင်ရှိပြီးအလွန်စိုထိုင်းသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။
Vanilla နှင့် white cake ချက်ပြုတ်နည်းများကိုမတူညီသောချက်ပြုတ်နည်းများတွင်နံ့သာများသို့မဟုတ်ထုတ်ယူမှုများကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အဝါရောင်ကိတ်မုန့်အစဉ်အလာကြွယ်ဝသောနှင့်အတူတွဲဖြစ်ပါတယ် ချောကလက် buttercream ဒါမှမဟုတ် ခွေးရူး နှင့်အခြားအရသာများအတွက်အခြေခံစာရွက်အဖြစ်မကြာခဏကဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။
တဖန်လူတို့က“ အဖြူရောင်” နှင့်“ အဝါရောင်” တို့သည်အရသာမဟုတ်ဘဲ“ ကြက်ဥအနှစ်ကိတ်မုန့်” အားလုံးကိုမှာယူရန်မှာယူခြင်းသည်တူညီသောလက်စွပ်မရှိပါ။ ၎င်းသည်ကိတ်မုန့်ကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်အစဉ်အဆက်ပြုလုပ်ရန်သင်မှန်ကန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုနေကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာရွက်အတွက် AP မုန့်ညက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့သည်လည်းအဘယ်သူမျှမအတုဆိုးဆေးမရှိသောအရည်အသွေးမြင့်မားထောပတ်ကိုအသုံးပြုနေသည် (အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ထောပတ်ပိုမိုအဝါရောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုးဆေးသိကြသလား) ထောပတ်ဖြူ, အဖြူကိတ်မုန့်။ ရိုးရာအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်သည်ရှင်းလင်းစွာတွေ့ရသောဗာဒံသီးကိုအသုံးပြုသည်။ ယခုငါကိုယ်တိုင်ဗာဒံသီး၏အရသာကိုမနှစ်သက်သောကြောင့် vanilla bean paste နှင့် vanilla extract ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
မှန်ပါတယ်၊ ငါပြောတာမှန်ပေမယ့်ဒီမှာငါတို့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့“ အရသာကျော်ခြင်း” စည်းမျဉ်းတွေထဲကတစ်ခုလာတယ်။ ဒီစာရွက်ထဲမှာအရသာတွေယူဆောင်လာမယ့်ဒီပါဝင်မှုမှာပါဝင်တဲ့အရာများစွာမပါဝင်ပေမယ့်ထုတ်ယူမှုအရည်အသွေးက # 1 ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ vanilla bean ကိုငါးပိနှင့်ထုတ်ယူအနည်းငယ်သန့်စင်သောအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲ Battery ကို tinge ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ငါအစားမှာအားလုံးအရသာထက်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။ သငျသညျလုံးဝအဖြူရောင်အရောင်ရှိရမည်ဆိုပါကဤစာရွက်ထဲမှာ vanilla ထက်ဝက်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဗာဒံသီးထုတ်ယူ၏ 1/2 Tsp ထည့်ပါ။
သငျသညျဗာဒံသီးထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့လိုပေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း vanilla (အတု) ထုတ်ယူပင်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအခြားအကြောင်းပြချက်သင်သည်ဤအဖြူကိတ်မုန့်စာရွက်ငါ့ကဲ့သို့သောအခြားကိတ်မုန့်စာရွက်အတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုလျှင် စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် အရောင်ကတကယ်အရေးကြီးတယ်ဘယ်မှာ။ ကိတ်မုန့်ကိုဖြူဖွေးလေလေအရောင်ဖြည့်ပြီးနောက်မှာအရောင်ကအမှန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ရယ်စရာကောင်းတာကငါတို့ကိတ်မုန့်ကိုကိုက်လိုက်တဲ့အခါတချို့အရာတွေက“ YUM!” လို့ထင်စေတယ်။ texture, အရသာနှင့်အစိုဓာတ်။ သင့်လျော်သောရောနှောခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရရှိနိုင်သည်၊ အရည်အသွေးမြင့်သောထုတ်ယူမှုနှင့်အတူအရသာကိုရရှိသည်၊ သို့သော်အစိုဓာတ်သည်လှည့်စားသောအရာဖြစ်သည်။ သင်ရုံသင်၏ကိတ်မုန့် Battery ကိုထဲသို့ပိုပြီးအစိုဓာတ်ကိုစွန့်ပစ်မနိုင်သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး gummy ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့် ဦး နှောက်ကို“ စိုစွတ်သည်” ဟုထင်စေသောအရာတစ်ခုမှာဆီအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ငါအောင်စအကြောင်းကိုသိပ်ထည့်သွင်းရန်မကြိုက်ဘူး။ ငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီသုံးတာပိုအရသာမရှိဘူး၊
Cour Cream ကို White ကိတ်မုန့်ထဲထည့်သင့်သလား။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက (ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှကြာမည်ကိုပြောမည်မဟုတ်) ၎င်းတွင်ဖတ်ရှုခြင်းကိုသတိရသည် ကိတ်မုန့်ဖိုရမ်များ ဒီမှော်အဖြူကိတ်မုန့်စာရွက်အကြောင်းကိုခေါ် WASC ကိတ်မုန့် အားလုံးကိတ်မုန့်အလှဆင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ မကြာခင်မှာပဲငါ WASC က White Almond Sour Cream ကိတ်မုန့်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ပထမဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းကအဖြူရောင်သေတ္တာကိတ်မုန့်ပဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
အခုငါ boxed ရောနှောပေါင်းစပ်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဆရာဝန်များ boxed ရောနှောအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုဆန့်ကျင်ဘာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ကိတ်မုန့်အလှဆင်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုထူးခြားစေမည့်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြုလုပ်ရန်ရှာနေသည်။ မည်သူမဆိုတစ် box ကိုရောနှောထရိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကတခြားလူတိုင်းရဲ့ကိတ်မုန့်နဲ့တူအရသာ။ ငါပြောနေတာကိုမင်းတွေ့လား
ဒီတော့ဒီအဖြူကိတ်မုန့်အမျိုးအစားကိုသင်ဘာလို့သုံးမှာလဲ။ ကောင်းပြီလူတိုင်းသည်ခြစ်ရာမုန့်ဖုတ်သူမဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသေချာပေါက်ထွက်ပေါက်လိမ့်မယ်တဲ့မြန်ဆန်လွယ်ကူသောကိတ်မုန့်စာရွက်ချင်တယ်။ ဤစာရွက်သည်မအောင်မြင်သောကျိန်းသေဖြစ်ပြီး“ Doctored Box Mix” ဟုသင်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ချဉ်သောမုန့်နှင့်ကြက်ဥများအပြင်၎င်းကိုပိုမိုအရသာရှိပြီးစိုစွတ်စေသည်။ ၎င်းသည်သေတ္တာအရောအနှောအများစုတွင်ရှိသည့်“ ဓာတုဗေဒ” အရသာမှဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုခြစ်ရာအရောအနှောအစားလုပ်ပါ့မလား။ ကောင်းပြီတကယ်သင်မှတက်ပါပဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားကဆန့်ကျင်ကကိုင်ထားမည်မဟုတ်ကတိ။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အမြဲတမ်းရှေ့ထားပါ။ သင်ကခြစ်ရာကနေမုန့်ဖုတ်တယ်လို့ပြောရင်၊ သင်တစ် ဦး သေတ္တာကိုအသုံးပြုလျှင်သင် 'အသစ်စက်စက်ဖုတ်ထားသောကိတ်မုန့်' ကိုအသုံးပြုသည်ပြောokုံ ok ပါပဲ။
ဒီတော့ဒီမှာအဖြူကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ပါပဲ။ အရာတော်တော်များများလိုပဲကြောင်တစ်ကောင်ကိုအသားအရေခြောက်သွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးထက်ပိုပါတယ်။ ကိတ်မုန့်တစ်ခုကိုဖုတ်ရတယ်။
ငါပြောနေသကဲ့သို့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်စာရွက်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်သင့်အတွက်အလွန်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်မည်။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာရိုးရှင်းစွာရောစပ်။ ရောစပ်ထားသောစတိုင်သည်သင်၏ထောပတ်နှင့်သကြားကိုအလင်းနှင့်မွှေးမှီတိုင်အောင်အတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်သည်အထိသင်၏ကြက်ဥလူဖြူထည့်ပါ။ ထိုအခါခြောက်သွေ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အရည်ထည့်ပါ။ ဒီဟာငါသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပါ
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့သင်သည်သင်၏ကြက်ဥလူဖြူများကိုပျော့ပျောင်းသော်လည်းခိုင်မာသောအထွတ်အထိပ်သို့တက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောပတ်နှင့်သကြားမုန့်တို့ကိုပေါင်းပြီးသည်အထိခြောက်သွေ့။ အရည်ပါဝင်သောအရာများကိုပေါင်းစပ်သည်။ ပြီးရင်သင်၏ဥအဖြူကိုခုံးထဲထည့်လိုက်သည်။ ဒီနည်းပညာကပိုမိုပေါ့ပါးပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိတ်မုန့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအလွန်အကျွံရောစပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်နှစ် ဦး စလုံးကြိုးစားပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုကြည့်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကနွေးထွေးနေတုန်းပဲငါကိတ်မုန့်တွေအမြဲထုပ်တယ်။ ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးထုပ်ပြီးရင်ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ ဤသည်ကိတ်မုန့်၏အစိုဓာတ်ကိုအတွက်သော့ခတ်။ ပြီးတာနဲ့အအေးပေမယ့်အေးခဲမဟုတ်, သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့် (optional ကိုပေမယ့်အဖြူအချပ်ဖြစ်ပေါ်) နှင့်ကောင်းတဲ့နှင့်အတူနှင်းခဲကိုချွတ်နိုင်ပါတယ် အဖြူ buttercream သို့မဟုတ်သင်အလိုရှိသည်မည်သည့်နှင်းခဲ။
အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ပူလောင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါလွဲချော်သောအရာတစ်ခုခုရှိပါကငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်အခမဲ့ခံစားရနှင့်သင်ဤစာရွက်ကြိုက်လျှင်, သင်ကအသုံးပြုလျှင်ငါမျှဝေနှင့်ပြန်ချိတ်ဆက် forevah ငါကိုချစ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ<3
ကိတ်မုန့်လိုမျိုးလိုကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုအလှဆင်ရမလဲဆိုတာပိုလေ့လာချင်ပါသလား။ အကြှနျုပျ၏အခမဲ့လေ့ကျင့်ရေးထွက်စစ်ဆေးပါ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်တော့မှမ
အလင်း၊ fluffy၊ အရသာပြည့်ဝပြီးလုပ်ရလွယ်သောအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်လေး။ အခြားချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မည့်မည်သည့်မုန့်ကိုမဆိုအတွက်ကောင်းမွန်သောအခြေခံစာရွက်။ ဤနည်းတွင် 8'x2 'ပတ် ၀ န်းကျင်ကိတ်မုန့်နှစ်လုံးသို့မဟုတ် ၆'x2' ရှည်သောကိတ်မုန့်နှစ်လုံးအတွက်လုံလောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည် ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၂၈ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ589kcal
▢၁၄ oz (397 ဆ) သကြား
▢၆ ကြီးမားသည် (၆ ကြီးမားသည်) ဥအဖြူ လတ်ဆတ်တဲ့အခန်းအပူချိန်မှာသေတ္တာဘူး
▢၁၄ oz (397 ဆ) AP ဂျုံမှုန့်
▢2 1/2 Tsp (2 1/2 Tsp) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) ဗာဒံသီး အဖြူရောင်ကိတ်မုန့်အတွက်ရှင်းပါ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) vanilla ထုတ်ယူ
▢၁၀ oz (၂၈၄ ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢၃၂ oz (907 ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) ချောကလက်ဖြူ
▢၁ oz (၂၈ ဆ) ပူနွေးသောရေ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) နွေးအညိုရောင်အစားအစာအရောင်
▢နှစ် Tsp (နှစ် Tsp) အမှန်တကယ်ရူးသွပ်ပလတ်စတစ်အမှန်ပင်
▢၁ Tbsp (၁ Tbsp) အမြဲတမ်း သံပုရာထုတ်ယူသို့မဟုတ်နှင်းဆီရေကိုသုံးနိုင်သည်
သင်၏မီးဖိုကို335ºFသို့အပူနှင့် 8'x2 'ိတ်မုန့်ပြားနှစ်ခုကိုကိတ်မုန့်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အခြားပိုမိုနှစ်သက်သောဒယ်အိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။
ချောမွေ့သည်အထိထောင့်ကိုထောင့်ချိုးနှင့်လှောင်ထားသည့်အရာနှင့်ထောပတ်ထည့်ထားပါ။ သင်၏သကြားထဲတွင်ဖြန်းပြီးနောက်အဖြူရောင်နှင့်အဖြူရောင်အထိ (၅ မိနစ်ခန့်) ကြာမြင့်စွာရိုက်နှက်ပါ။
အနိမ့်ကိုရောနှောနေစဉ်ကြက်ဥအဖြူတစ်ကြိမ် (အကြမ်းအားဖြင့်) ကိုထောပတ်အရောအနှောထဲသို့ထည့်ပါ။ နောက်ထပ်ထည့်ခြင်းမပြုမီအပိုတစ်ခုချင်းစီအပြီးပေါင်းစည်းပါ။ သင်၏ကြက်ဥအဖြူများသည်အခန်းအပူချိန်တွင်မရှိလျှင်၎င်းတို့ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုချက်ပြုတ်ဖို့သတိထားပါ! အအေးကြက်ဥအဖြူများသည်ဘက်ထရီကိုညှစ်ထုတ်လိမ့်မည်။
သင်၏ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများအနက်မှသုံးပုံတစ်ပုံကိုကြက်ဥ / ထောပတ်အရောအနှောထဲသို့ပေါင်းထည့်ပြီးသည်အထိပေါင်းထည့်သည်အထိအနိမ့်တွင်ရောစပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏အရည် ၁/၂ ကိုထည့်ပါ၊ ထို့နောက်ခြောက်သွေ့ပါ၊ ထို့နောက်အရည်နှင့်ကျန်အခြောက်များကိုထည့်ပါ။ ရုံပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါစေ။
Battery ကိုပြင်ဆင်ထားသည့်ကိတ်မုန့်အိုးများထဲသို့ထည့်ပြီး ၃၃၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် ၂၅ မှ ၃၅ မိနစ်သို့မဟုတ်အလယ်တွင်ပွတ်တိုက်သွားသည့်အခါသွားပွတ်သန့်ရှင်းသည့်အထိမထည့်ပါနှင့်။
၁၀ မိနစ်ခန့်အေးအောင်ထားပါ၊ ပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်များကိုအအေးခံစင်ပေါ်သို့လှည့်ပါ။ နွေးပါ။ အေးခဲစေရန်ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ ဒီအစိုဓာတ်ကိုအတွက်သော့ခတ်။ အေးခဲပေမယ့်အေးခဲမနေဘူးဆိုရင်သင်ဟာသင့်ကိတ်မုန့်တွေနှင်းခဲတွေရဲ့အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Chake ကိတ်မုန့်။
ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကိုရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးနှင့်ပေါင်းပြီးသကြားလုံးပူးတွဲပါ။ အနိမ့်အမြင့်တွင်ပေါင်းစပ်ရန်တွန့်သော၊ ထို့နောက်အမြင့်ကိုတက်ပါ၊ သင်၏ထောပတ်ကိုအပိုင်းအစငယ်များ၊ vanilla နှင့်ဆားများထည့်ပါ။ ရောနှောနေသည့်မီးကိုအမြင့်သို့ပြောင်း။ အလင်း၊
ချောကလက်နှင့်ရေများကိုမိုက်ကရိုဝေ့တွင်အရည်ပျော်အောင်ချောချောမွေ့မွေ့အထိတိုးမြှင့်ပါ။ အစားအစာအရောင်စုံတွဲတစ်တွဲပေါက်ထည့်ပါ။ အအေးခံထားရတဲ့ကိတ်မုန့်ကိုမသောက်ခင်ဒီဂရီ ၉၀ လောက်အေးအောင်ထားပါ။ ချောကလက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးပါကသင်သည်အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းသောရွှေမှုန့်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးဆေးသုတ်ခြင်း၊
* မှတ်ချက် - ဤသည်အဆိပ်မဟုတ်သောရွှေဖုန်မှုန့်ဖြစ်သည်
သင်သတိမပြုမိရန်အရေးကြီးသောအရာများ 1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ထောပတ်နို့၊ ထောပတ်စသည်) ပင်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ 4. နှင်းခဲများမဖြည့်ခင်ကိတ်မုန့်များကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။ နှင်းခဲနှင့်အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်ကိုသင်လိုချင်လျှင်ဖောင့်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့် stacking အဘို့လည်းကြီးလှ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်မပို့မီကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အမြဲထားလေ့ရှိသည်။ ၅။ အကယ်၍ စာရွက်သည်မုန့်ညက်ကဲ့သို့သောတိကျသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတောင်းဆိုပါက၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေကြောင်းစာရွက်တွင်မဖော်ပြထားပါက၊ ရည်ရွယ်သည့်ဂျုံမှုန့်၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးဒီစာရွက်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။
နို့ချောကလက်နဲ့ ganache လုပ်နိုင်တယ်